निर्मला प्रकरणमा पत्रकार रबि र खेमको बिबाद, जापानबाट ज्वालाको चुनौती – Rapti Khabar
रवि लामिछानेले निर्मला हत्या काण्ड बिषयमा बोली रहदा कञ्चनपुरका पत्रकार खेम भण्डारीलाई यति धेरै भुकम्पको झट्का किन ! अब शंका यिनि माथि पनि गर्ने कि नगर्ने !खेम भण्डारी र रवि लामिछानेको कुरा हामीले सुनिसक्यौं, रबिले यो हाम्रो आधिकारिक धारणा हैन यसबारे बहस र छलफल गरौ राज्यलाइ सहयोग गरौ भनेर एउटा कार्यक्रम प्रस्तोता र संचारकर्मीको धर्म निभाएको छ तर आफूलाई बरिष्ठ पत्रकार, गरिबको न्यायका लागि कुटिएको ब्यक्ति भनेर दुनियाको सेन्टिमेन्टसँग खेल्दै हिँडने खेम भण्डारीले चाहि जनतालाई उरालेर आफ्नो फेशबुक स्टाटस मार्फत आगोमा घ्यु थप्ने काम गरिरहेको देखिन्छ।जनतालाई भ्रममा पारेर निर्मला पन्तको बलात्कार पछि हत्याको अनुसन्धान लाई प्रभावित पार्न उक्त घटनालाई आन्दोलनको रुपमा परिणत गर्ने पत्रकार खेम भण्डारी नै हुन् ।
सोझा जनतालाई दिग्भ्रमीत गरि भिडलाई हौस्याएर हिंसात्मक आन्दोलनमा होम्ने पत्रुकार चाटुकार चाहे जो सुकौ होस त्यसलाई अनुसन्धान को दायरामा ल्याउनु पर्छ !
खेम भण्डारीले रातभरी घोकेर बिहान आफ्नै युट्युब च्यानलमा अन्तर्बार्ता दिनुको सट्टा रबि लामिछानेसँग सम्पर्कमा आउनु पर्ने हो कि होइन जबकी News 24 मा यो घटनाको बारे त्यत्रो चिरफार भैसकेको थियो। प्रत्ययक्षदर्शी महिलालाई लुकाउन पाईदैन भन्ने खेम भण्डारीको तर्क हो भने आफूले बारम्बार बलात्कारी vip हो भनेर ठोकुवा गरेर फेशबुक मार्फत यो सिंगो घटनालाई गुमराहमा पार्ने प्रयास गरिरहँदा उनले पनि भनिदिनु पर्यो कि त्यो vip बलात्कारी को हो. ..! आफूलाई पत्रकार हुँ , राज्यको चौथो अँग हुँ भनि दाबी गर्ने बरिष्ठले न्याय र कानुन बिपरित घटनालाई मोडेर दंगा फैलाउने कि कानुनलाई र प्रशासनलाई पनि सहयोग गर्ने?
म लोकतन्त्रको लागि लड्दा अमेरिकामा भाँडा माझ्दै थिए केहि ब्यक्तिहरु भनेर खेमले छटपटी ओकलीरहँदा यो चाहिँ बिर्सेछन् कि तिनै अमेरिकामा भाँडा माझ्नेहरुले तिनी र तिनका लोकतन्त्रका टाउके बादशाहलाई खसी पाले झैं पाल्न आफ्नो परिवारबाट टाढा भएर , आफ्नो सपना, आयु र पसिना बिदेशमा बेचेर रेमिट्यान्स पठाईरहेका थिए! तसर्थ खेम भण्डारीले थुतुनो र दिमाग सहि ठाउँमा दल्नु होला।आज देशमा एकमात्र सत्य र निडर पत्रकारिता गर्ने रबि लामिछाने मात्र हुन्।
चुनाबमा मेयरको पद नपाएर भड्किएका स्वघोषित बरिष्ठले रबि लामिछाने लाई नैतिकताको पाठ पनि नसिकाउन्! अझै केहि बिग्रेको छैन, एकपटक यी साला भेना दुबैलाई कस्टडीमा राखेर फेरि अनुसन्धान गरिनु पर्छ। रबि लामिछाने कुनै बलात्कारी जोगाउन अन्टसन्ट स्टाटस लेखेर रातारात भाईरल भएका पत्रकार होइनन्, देशका गरिब जनताका आशाका धरोहर हुन्।
उनैको कार्यक्रम बाट कैयौ भ्रस्टाचारी जेल गएका छन्, नेताका पाल्तु ठेकेदार बहुलाएर जंगल पसेका छन्, ठगहरुले खाएको पैसा उनको नाम लिनासाथ वापस आएको छ, हराएका आफन्तहरु भेटिएका छन्, कति दलालहरुको जागिर चट भएको छ, गैरकानुनी धन्दाका मालिकहरु भूमिगत भएका छन्, हजारौ दुखमा परेका हरुको उद्दार भएको छ, सबैभन्दा लामो टक सो चलाएर गिनीज़ बुकमा नेपालको नाम चढाएका छन्, तराईमा डुबान पर्दा मुसहर बस्ती बसाए, कालीकोट रास्कोटमा उनकै अगुवाईमा रास्कोट अस्पताल बन्दै छ, त्यहाँ हजारौं जीवनको सम्भावना गुमाईसकेका गरिबहरुले उपचार पाउने छन्, को बन्छ करोडपतिमा जितेको १२ लाख पनि अस्पतालमै लगाए, भ्रष्टहरुको मुटुमा सुनामी आउने गरि निडर र निर्भीक भएर ज्यानको बाजी थापेर दिनैपिच्छे कराएका करायै छन्।
रबिलाई औकात सिकाउने ए औतारी खेम, तिम्रो हैसियत चाहि के हो? के गर्यौ देश र जनताको लागि पत्रकारको परिचयपत्र निधारमा टाँसेर? ल मसँग बहस गर्न आऊ..! तिमीले लोकतन्त्रको लागि ठड्याएको चोर औंला भन्दा अमेरिकामा भाँडा माझेर देश बनाउन फर्किएका रबिका स्वाभिमानी हातहरु कति हो कति महान् छन्..! मिडिया र कानुनलाई यसरी सरेआम मेनिपुलेट गर्ने अधिकार तिम्लाई कस्ले दियो हँ?
(लेखिका तथा समाजसेवी ज्वाला संग्रौलाको फेसबुकबाट)
हेर्नुहोस निर्मला काण्ड बारे पत्रकार खेम भण्डारीको टिप्पणी
भौतिक प्रमाणसहित दिलिप विष्ट नै अपराधी हो भनेर दावी गर्ने मौका गुमाए । उनीसँग करिब आधा दर्जन त्यस्ता उपाय थिए जसबाट अपराधी सावित गर्न सकिने भौतिक प्रमाण प्राप्त हुन सक्थे तर त्यतातिर उनको ध्यान नै गएन । अहिले आएर उनी आँशु झारेर दिलिपलाई अपराधी सावित गर्ने निरर्थक प्रयासमा लागेका छन् ।
न्यूज–२४ टेलिभिजनको ‘जनतासँग सीधा कुरा’ कार्यक्रमको पछिल्लो अंकमा निलम्बित डिएसपी अंगुर जिसीको अन्तर्वार्ता प्रसारण भएपछि निर्मला प्रकरणमा नयाँ तरंग आएको छ ।
निर्मलाको बलात्कार–हत्या भएको तीन दिनपछि केन्द्रीय जाँच ब्यूरो (सीआइबी)े टोलीको नेतृत्व गर्दै कञ्चनपुर आएका डिएसपी जिसीले दिलिप विष्ट एक्लैले निर्मलाको बलात्कार र हत्या गरेको ठोकुवा गरेका छन् । जबकी कञ्चनपुर प्रहरीले बिहीबार मात्रै नागरिक दैनिकसँग अहिलेसम्म घटनास्थल कहाँ र बलात्कार एकल वा सामुहिक के हो भन्ने निष्कर्षमा नपुगेको बताएको छ ।
जिसीले प्रहरी हिरासतमा दिलिप विष्टले दिएको साविती बयानलाई आधार मानेर त्यस्तो ठोकुवा गर्र्दै दिलिपविरुद्ध भौतिक प्रमाण (फिजिकल एभिडेन्स) भने नरहेको स्वीकारेका छन् ।
अन्तर्वार्तामा जिसीले आफूले हिरासतमा खिचेको भिडियोकै आधारमा दिलिपलाई सय प्रतिशत अपराधी घोषित गरेका छन् । उनले पारिस्थितिक र प्राविधिक दुबै दृष्टिले दिलिपले हिरासतमा दिएको बयान सत्य भन्दै दिलिप नै अपराधी भएको ठोकुवा गरे पनि उनको समग्र अन्तर्वार्ताले जिसी अलमलमा रहेका र आफूअनुकूलको कुरा मात्रै गरेकोे पाइएको छ ।
जिसी आफूलाई नेपाल प्रहरीको अब्बलदर्जाको अपराध अनुसन्धानकर्ता दावी गर्छन् । तर, अन्तर्वार्ताका क्रममा उनले बलात्कारपछिको हत्याका क्रममा महत्वपूर्ण मानिने केही आयाम र पक्षलाई लुकाएका छन् । उनले आफ्नो दावीलाई सत्य सावित गर्न तर्क दिइरहँदा तिनै तर्कसँग जोडिएका तर उनको दावीलाई प्रतिकूल हुने सत्य भने लुकाएका हुन् ।
निर्मलाको लुगा र लास पखालिनु सामान्य
जिसीले निर्मलाको लुगा र शव पखालिनु अनुसन्धानका दृष्टिले सामान्य भएको बताएका छन् । भजाइनल स्वाबमा बलात्कारीको बीर्य पाइएको हुनाले लुगा र लास पखालिनु सामान्य भएको उनको ठहर छ । यो अचम्मकै तर्क हो । भजाइनल स्वाबमा बीर्य नपाइएको भए के हुन्थ्यो ? जिसी आफैले भनेका छन् – लास र लुगामा रगत, बीर्य र योनांगको रौं (प्युबिकल हेअर) हुन्छन् । एकातिर उनी यस्तो भन्छन् अर्कातिर लुगा र रौं पखाल्नु प्रमाण नष्ट होइन भन्छन् । निर्मलाको लुगामा रहेका बलात्कारीका रौं, फाइबर, बीर्य वा रगत सुरक्षित भएको भए आज डिएनए प्रोफाइल तयार गर्न विकल्प उपलब्ध हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो ? रगत र बीर्य पानीले बगाएको पूर्वानुमान कसरी ग¥यो प्रहरीले र जिसीजस्तो अनुसन्धानकर्ताले त्यस्तो पूर्वानुमानका आधारमा मृतकको लुगा र लास पखाल्नुलाई जायज कसरी ठाने ? रगत र बीर्य पखालिए पनि लुगामा रौं अड्किएको हुनसक्ने सम्भावनातर्फ किन सोचिएन ?
प्रमाण नष्ट हुँदा सबैभन्दा ठूलो समस्या जिसीलाई नै परेको छ । उनले दिलिपलाई अपराधी सावित गराउने प्रमाण नै रहेन तर पनि उनी दर्जनौं प्रमाण नष्ट गरिएको कुरा मान्न तयार छैनन् । यो आश्चर्यकै कुरा हो ।
पाइलाको डोब र पाँच औलाको डामलाई किन उपेक्षा ?
जिसीले अन्तर्वार्ताका क्रममा घटनास्थल नजिक खोलाको किनारमा खुट्टाको डोब देखिएको र निर्मलाको घाँटीमा पाँच औंलाको डाम रहेको बताएका छन् । सायद ती दुबैको फोटो प्रहरीसँग होला । त्यसो हो भने खुट्टाको डोब र पाँच औलाको डामको फरेन्सिक परीक्षण किन नगरिएको ?
पाँच औंलाकै डाम पर्दा फिंगरप्रिन्ट सुरक्षित नभए पनि औलाको आकारप्रकार त सुरक्षित रहन्छ नि ? त्यो आकारप्रकार र दिलिप विष्टको बाँया हातका औलाको आकारप्रकार भिडाउन किन सकेनन् जिसीले ? अर्कोतिर, खुट्टाको डोबले अपराधीले जुत्ता वा चप्पल के लगाएको थियो, कति साइजको थियो, खुट्टाको आकार कति र कस्तो थियो, कुनै सिग्नेचर मार्क थियो कि जस्ता जानकारी दिन्छ कि दिंदैन ? दिन्छ भने दिलिप विष्टको खुट्टासँग त्यो डोब मिलान किन गरेरनन् अब्बल अनुसन्धानकर्ता जिसीले ?
लुगा सुरक्षित नराख्नुको कारण
जिसीले अन्तर्वार्ताका क्रममा निर्मलाका लुगा सुरक्षित नराख्नुको अनौठो कारण बताएका छन् । उनले पहिचान नखुलेका व्यक्तिको मात्रै लुगा सुरक्षित राखिने तर्क दिएका छन् । विकसित मुलुकका अनुसन्धानकर्ताले यस्तो सुनेमा कति हाँस्दा हुन् ? निर्मलाका लुगा प्रहरीले सुरक्षित राखेको भए आज भजाइनल स्वाब सकियो भनेर ट्वाँ पर्नुपर्ने अवस्था नै रहने थिएन । ती लुगाको गहन परीक्षण गरेर बलात्कारीको रौं वा उसको लुगाबाट झरेका फाइबर पाउन सकिन्थ्यो कि ? रौंबाट डिएनए प्रोफाइल तयार पार्न सकिने र फाइबरबाट अपराधीको पहिचान हुन सक्ने कुरा किन बिर्सेका होलान जिसीले ?
दिलिपको बयान टेक्निकल्ली फिट
दिलिपसिंह विष्टले प्रहरी हिरासतमा दिएको बयान प्राविधिक रुपमा सत्य भएको र त्यसबाट दिलिप नै अपराधी हो भन्ने पुष्टि हुने जिसीको तर्क छ । जिसीले खिचेको भिडियोमा दिलिपले सजिलै निर्मलालाई बोकेर उखुबारीमा लैजान्छ र प्रतिरोधविना नै बलात्कारपछि हत्या गरेको बताउँछ । के यो सम्भव छ ? सम्भव होला रे † त्यसो हो भने निर्मलाले कुनै प्रतिरोध गरिनन् त ? १३ वर्षिया बालिकाले गर्ने प्रतिरोधको कुनै प्रमाण हुँदैन घटनास्थलमा ? हुन्छ भने के थियो त्यो प्रमाण ? किन जिसीजस्तो टप इन्भेस्टिगेटरले त्यो प्रमाण किन नखोजेको ?
साइकल देखियो अम्बा र किताबकपी देखिएन
१० साउन २०७५ दिउँसो ४ बजे उल्टाखामकै भण्डारी थरकी महिलाले स्याउला काट्दै गरेको बेला खोलामा साइकल देखेकोले बलात्कारपछि हत्या त्यसभन्दा पहिले उखुबारीमैं भएको निष्कर्ष निकालेका रहेछन् जिसीले । ती महिला सडकछेउकै एक रुखमा स्याउला काटिरहेकी थिइन् । त्यो रुखबाट साइकल ५ मिटर टाढा थियो भने किताबकपी र अम्बाको थैलो जम्मा २ मिटर टाढा । ती महिलाले किताब र अम्बाको पोलिथिन नदेखेको बयान दिएको किन लुकाइयो ? निर्मलाकी आमासँगै १० गते राति निर्मलाको खोजीमा निस्केका एक छिमेकीका अनुसार खोला किनारमा टर्चलाइट बालेर हेरिएको थियो । उनीहरु किताब पाइएकोपट्टि सडकछेउबाट दुई पटक ओहरदोहर गरेका थिए । उनीहरु हिंडेको ठाउँबाट किताब २ मिटरभन्दा कम दूरीमा थियो । भण्डारी थरकी ती महिला र खोजीमा निस्केकाहरुले दुई पटकसम्ममा किताबकपी र अम्बा नदेख्नु स्वाभाविक होला तर जिसीले उनीहरुले नदेखेको तथ्य लुकाउनु कुनै पनि अवस्थामा स्वाभाविक होइन ।
किताब नभिज्नुको अदभूत कारण
१० गते राती १० बजेतिर उल्टाखामको त्यो क्षेत्रमा भारी वर्षा भएको थियो । निर्मलालाई खोज्न निस्केको दुर्गादेवी पन्तसहितको टोली आधा घण्टा ओत लागेको थियो । तर, भोलिपल्ट किताब सुख्खा अवस्थामा भेटिएको स्वयं जिसीले स्वीकारेका छन् । उनले किताबकपी नभिज्नुको अद्भूत कारण औल्याएका छन् । प्लास्टिक लेमिनेशन भएको हुँदा पानी तर्केको उनको कथन छ । आधा घण्टाको घनघोर वर्षामा पनि पानी भित्र नपस्ने कस्तो लेमिनेसन होला त्यो ? किताब राखिएको ठाउँ हेर्दा भारी वर्षाले त बगाउनु पर्ने हो तर किताब सुख्खा पाइए । अन्तर्वार्ताको भिडियोमा जिसीले भनेको किताबकपी नभिज्नुको कारण पटक–पटक सुन्दा पनि बुझ्न नसकिने छ । त्यस्तो पनि होला र ? भन्ने प्रश्न स्वाभाविकै आउँछ ।
कुकुरको प्रयोग, सुख्खा किताब र अम्बाको थैलो
शव पाइएको स्थल तथा अम्बाको थैलो र किताब पहिले नै जम्मा भएका सर्वसाधरणले छोएको भन्ने जिसीको तर्क गलत हो । प्रत्यक्षदर्शीहरुका अनुसार सर्वसाधारण कसैले पनि कापीकिताब र अम्बाको थैलो छोएका होइनन् । प्रहरीले नै अलि टाढा रहेको अम्बाको थैलो किताब नजिक फ्याँकेका हुन् ।
तर, जिसीले किताबकपी दुषित भइसकेको हुँदा कुकुर प्रयोग गरे निर्दोष फस्ने तर्क दिएका छन् । अर्कोतिर उनले किताबकपी आफूले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा थन्क्याइएको देखेको बताएका छन् । उनीजस्तो घघडान अनुसन्धानकर्ताले ती कपीकिताबको फरेन्सिक जाँच किन गराएनन् ? तिनमा निर्मलाबाहेकका फिंगरप्रिन्ट हुन सक्थे । कतै दिलिपको नै फिंगरप्रिन्ट पाइन्थ्यो कि ?
अचम्म त के भने अम्बाको थैलोलाई पनि अंगुर जिसीले अनावश्यक ठानेर मिल्काइदिए जस्तो छ । त्यो थैलोमा रहेको अम्बा र बम दिदीबहिनीको घरमा काटिएको विवादास्पद अम्बाको रुखबीच सम्बन्ध बारे थाहा पाउन पनि अम्बाको फरेन्सिक फरीक्षण गराउनु पथ्र्यो कि पर्दैन थियो ? कतै ती अम्बा बम दिदीबहिनीको घरको अम्बाभन्दा फरक थिए कि ? आफूलाई सफल अनुसन्धानकर्ता बताउने जिसीले किन त्यति पनि किन सोच्न सकेनन् ? सोचेका हुन् र परीक्षण गराइएको हो भने लुकाउनुको तात्पर्य के हो ?
सर्टको खल्तीको कहानी
जिसीले अन्तर्वार्तामा सर्टको खल्ती आफूले च्यात्न नलगाएको बताउँदै ३ साउन २०७५ मा शव पाइएको स्थलमैं टुक्रा पाइएको आशय व्यक्त गरेका छन् । फेरि यहाँनिर फरेन्सिक परीक्षण कै कुरा आउँछ । दिलिप विष्टको सर्टको त्यो खल्ती २३ दिन अगाडिदेखि नै निर्मलाको शव नजिक रहेको थियो भने त्यसको फरेन्सिक जाँच गराए त टन्टै साफ हुने थियो । २३ दिनपछि बरामद त्यो टुक्रा हेर्दा ताजै देखिएकोले उनीमाथि आरोप लागेको हो । आरोप मात्रै होइन, उनको टोली दिलिप विष्टको घर पुगर खानतलासी तलासी गर्दा एक प्रहरीले खल्ती च्यातेर आफ्नो खल्तीमा हालेको देख्ने प्रत्यक्षदर्शी अझै पनि जीवित छन् । अर्कोतिर, घटनास्थलमा टुक्रा भेट्टाएर टोली दिलिपको घर पुगेको भए विश्वास बढ्थ्यो । दिलिपको घरबाट टोली घटनास्थल पुग्यो र खल्तीको टुक्रा पायो । त्यतिसम्म ठीकै छ, अंगुर जिसीजस्तो जिनियसले त्यो टुक्राको फरेन्सिक परीक्षण गराएको भए त आज निलम्बित पनि हुनुपर्ने थिएन, आरोप पनि खेप्नुपर्ने थिएन, दिलिप विष्टलाई अपराधी करार गर्न यस्तो माथापच्ची गर्नुपर्ने पनि थिए ।
आधारविना दिलिप विष्ट नै अपराधी भएको निष्कर्ष
अंगुर जिसी दिलिप विष्ट नै अपराधी हो भन्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् । उनी आफैले अनुसन्धानको नेतृत्व गरिरहेका थिए र आफूलाई ठूलै अनुसन्धानकर्ता पनि भन्छन् । तर, दिलिप नै अपराधी हो भन्ने उनको दावीलाई पुष्टि गर्ने कुनै पनि भौतिक प्रमाण उनले जुटाएनन् । पाइलाको डोब, पाँच औलाको डाम, अम्बा, किताबकपी, लुगा आदिको फरेन्सिक जाँच गर्न समेत ध्यान नदिने उनी कस्ता अनुसन्धानकर्ता ? यी आधादर्जन बस्तुमा कहिं न कंही अपराधी प्रमाणित गर्न सकिने भौतिक प्रमाण हुन सक्थ्यो । सबै कुरा पानीले बगाइसक्यो भनेर त्यतापट्टि ध्यान नदिनुले जिसीको अनुसन्धान क्षमतामैं प्रश्न खडा गरेको छ । आफै निर्णय तहमा बसेका व्यक्तिले अहिले भौतिक प्रमाणविना मनगढन्ते तर्कका आधारमा कसैलाई अपराधी घोषित गर्दाको परिणाम के हुन्छ सायद जिसीलाई थाहा छैन ।
बयानको भिडियो मात्रै सहारा
दिलिप विष्टको बयानको भिडियो ३ भदौ मध्यरातमा खिचिएको हो तर जिसीले आफू निलम्बित भइसकेपछि मात्रै त्यो भिडियो लिक गरेका हुन् । उनले ४ भदौमा दिलिपलाई म्याद थप्दा र सरकारी वकिल कार्यालयमा बयान गराउँदा त्यो भिडियो किन पेश गरेनन् ?
त्यो भिडियो बनाउनुभन्दा पहिलेको पृष्ठभूमिका बारेमा सायद जिसी अनविज्ञ छन् । दिलिपलाई २ भदौमा उल्टाखामको सरस्वती मावि नजिकबाट पक्राउ गरेर झण्डै २४ घण्टा गैरकानुनी हिरासतमा राखिएको थियो । त्यो अवधिमा दिलिपलाई यातना दिइएको प्रमाणकै आधारमा अदालतमा उनीसहितका ४ जनाविरुद्ध यातना सम्बन्धी मुद्दा चलेको हो । महाराजगञ्जस्थित त्रिभूवन विश्वविद्यालयको शिक्षण अस्पतालका फरेन्सिक विज्ञले दिलिपलाई हिरासतमा यातना दिइएको प्रमाणित गरिसकेका छन् । यातनाकै कारण दिलिपले हिरासतको बयानमा अपराध कबुल गरे तर पछि इन्कार गरिदिए । अदालतले विश्वास गर्ने कुनै पनि लिखतमा दिलिपको साविती बयान छैन । जिसीविरुद्ध अदालतमा यातना सम्बन्धी मुद्दा चलिरहेको छ । उनलाई अदालतले सफाई निदिंदै यातना दिएर गराइएको बयानका आधारमा भ्रम छर्नु कति जायज हो ?
डिएनए बिग्रेको फाइदा उठाउँदै
प्रहरीको केन्द्रीय विधिविज्ञान प्रयोगशालाले निर्मलाको स्वाबमा पाइएको बीर्यबाट बलात्कारी पहिचान गर्न सकिने डिएनए प्रोफाइल तयार पर्दा गरेको त्रुटीबाट भने जिसीलाई फाइदा पुगेको छ । डिएनएका आधारमा बलात्कारी पत्ता नै नलाग्ने अवस्था बनेपछि उनले भन्न पाएका छन् – दिलिप विष्ट नै अपराधी हो । तर, उनले के बुझेका रहेनछन् भने उनको तर्क र दावीले मात्रै कसैलाई दोषी ठह¥याउन सक्दैन अदालतले । अदालतले आँशु होइन प्रमाण माग्छ । र, जिसीको हातमा कुनै पनि भौतिक प्रमाण छैन । कुर्लेर, सुरिलो अन्तर्वार्ता दिएर केही मान्छेलाई प्रभावित गर्न सकिएला तर सिंगो न्यायालय र आमजनतालाई मुर्ख बनाउन सकिदैन । कापीकिताब, अम्वा, खुट्टाको डोब, पाँच औलाका डाम, निर्मलाका लुगा, दिलिपको सर्टको टुक्रा जस्ता महत्वपूर्ण बस्तुबाट भौतिक प्रमाण जुटाएको भए आज अंगुर जिसीले रोएर दिलिपलाई अपराधी सावित गर्ने प्रयास गर्नुपर्ने थिएन । उनी महान अनुसन्धानकर्ता हुन् भन्दैमा उनका तर्कलाई नै प्रमाण मानिदिनु पर्ने न्याय प्रणाली छ र यस देशमा ?
जिसीलाई फसाइएकै हो त ?
धेरै कुरा जिसीलाई नै थाहा होला उनलाई फसाउने चक्कर कहिले र कहाँबाट सुरु भयो भन्ने तर एउटा कुरा त आंशिक सत्य नै हो – जिसीलाई दिग्भ्रमित गराउने चलखेल भएकै हो । उनले गहिरिएर पुराना घटनाक्रममा ध्यान दिए भने धेरै कुरामा प्रष्ट हुनेछन् । दिलिप विष्टलाई उनले आफै पक्राउ गरेर आफूसँगै ४८ घण्टा राखेका हुन् कि भिडियो बनाउने बेला मात्रै उनले दिलिपलाई भेटेका हुन् भन्ने अन्तर्वार्तामा प्रष्ट पारिदिएको भए हुन्थ्यो । अर्को कुरा उनले गर्न चाहेर पनि गर्न नपाएका केही कुरा हुनसक्छन् कञ्चनपुरमा, त्यता सोचे उनले आफूलाई कहाँनिरबाट फसाउन थालिएको रहेछ भन्ने पत्ता लगाउने छन् ।
खल्तीको टुक्रामा आफू आरोपित हुनुपूर्व जिसीले कञ्चनपुरमा प्रहरी संगठनभित्रबाट कस्तो सहयोग पाए ? उनलाई कस्ता खालका सहयोगी उपलब्ध गराइयो ? घटनाबारे कस्तो कथा सुनाइयो ? जस्ता प्रश्नमा घोत्लिएर सोच्ने हो र जनतालाई सत्यतथ्य बताइदिने हो भने उनको स्पष्टवादिता प्रमाणित हुनेछ ।
असोज ११, काठमाण्डाै – दशैँ सुरु हुन एक महिना पनि बाँकी छैन । कोरोना महामारी नभएको भए यतिबेला बजारमा किनमेलको चहलपहल सुरु भइसकेको हुन्थ्यो । दशैँ तिहार आउनु दुई महिनाअघि नै नेपाली व्यापारी चीन पुग्थे, सर-सामग्री अर्डर गर्थे र एक महिनाअघि नै नेपाल भित्र्याइसक्थे । तर यसपाली अवस्था यस्तो छैन । दशैँ तिहारका लागि चीनबाट […]